Thursday September 21, 2017 - 09:25:12 in Wararka by Super Admin
Kumanaan katirsan ciidamada Melleteriga iyo kuwa kumaandooska Turkiga ayaa lagu daad gureeyay deegaannada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga, wariye katirsan Telefeshinka Afka Carabiga ku hadla ee Aljazeera oo booqday gobolka Haadaay ee Koonfurta Turkiga ayaa soo sheegay in uu arkay ciidamo wata gaadiid gaashaaman oo dhanka Suuriya kusii socda.
in kabadan 200 oo gaadiidka gaashaaman ah iyo tobanaan gaadiidka ciidanka xambaara ah ayaa gaaray marin xuduudeedka Baabul Hawaa ee kaabiga ku haaya dalka Suuriya waxaana lafilayaa in ay gudaha ugalaan gobollada idlib iyo Xalab.
Sarkaal u hadlay ciidanka ilaalada Xuduudaha Turkiga ayaa xaqiijiyay in ay jiraan dhaq dhaqaaqyo melleteri balse wuxuu diiday in uu faah faahin dheeri ah ka bixiyo, ciidamada khaaska,melleteriga iyo kuwa sirdoonka ayaa la sheegay in ay qeyb ka yihiin howlgalkan waxaana lafilayaa in Turkigu uu geli doono ugu yaraan sedax magaalo oo ay maamulaan Maleeshiyaadka Kurdiyiinta YPG iyo xoogaga islaamiga ah.
Bin Cali Yeldarem oo ah R/wasaaraha Turkiga ayaa shir guddoomiyay kulan ammaanka Qaranka Turkiga looga hadlayay wuxuuna sheegay in kulankaas diiradda lagu saaray sidii melleteriga Turkiga uga qeyb qaadan lahaayeen fulinta qodobo kamid ah heshiiskii Astana6 oo Turkiga awood usiinaya in uu kooxaha mucaaradka dhax dhaxaadka ah ugacan geliyo magaalooyin ay hadda maamulaan kooxaha islaamiga ah.
Shirkii Astana6 ee loo qabtay kooxaha mucaaradka Suuriya iyo Nidaamka Bishaar Al-asad ayaa lagu go’aamiyay in lagu kala qeybsado awoodda maamulka ee wadanka iyadoona dowladaha Ruushka,iiraan iyo Turkiga ay ku heshiiyeen in xoogaga islaamiga magaalooyinka ugu muhiimsan lagala wareego.